Xisbul-xaakimka Ethiopia Oo Jawaab Ka Bixiyey Eedo Uu Madaxweynaha Jigjigi U Jeediyey madixii sirdoonka Ee Raysal-wasaaraha Cusubi Xilka Ka Qaaday – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Xisbul-xaakimka Ethiopia Oo Jawaab Ka Bixiyey Eedo Uu Madaxweynaha Jigjigi U Jeediyey madixii sirdoonka Ee Raysal-wasaaraha Cusubi Xilka Ka Qaaday
Allhadaaftimo July 14, 2018 Uncategorized
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar Oo Cafis Weydiistay Shacabka Deegaanka Soomaalida Itoobiya”
“Cabdi Maxamuud Wuxuu Doonayaa Inuu Xilka Sii Hayo. Shakhsiyaadka Sirtooda Oo Aan Bannaanka Soo Dhigo ‘Kalsoonida La Igu Qabo Ayaa Badanaysa Ayuu Isleeyahay”
Jigjiga (Hubaal) – Madaxweynaha dawlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa hoggaanka Jabhadda ONLF ugu baaqay inay ka faa’iidaystaan baaqa Ra’isal wasaare Abiy Axmed uu u soo jeediyey jabhadaha iyo xisbiyada mucaaradka ee ah inay nabad qaataan. Wuxuu hadalkaasi ka sheegay wareysi uu siiyey warbaahinta Deegaanka, wuxuuna kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda iyo isbeddellada 100-ka maalmood ee uu xilka hayey ra’iisul wasaaruhu. Wuxuu intaa ku daray in mar kasta oo shaqo la qabanayo uu khalad dhici karo, “balse wararka brobogaandada marka la iska reebo wixii aan khaladkiisa leennahay inaan saxno ayaan diyaar u nahay” ayuu yidhi
Wuxuu kale oo sheegay Cabdi Maxamuud Cumar in khaladaadka hore u dhacay ay mas’uuliyaddooda qaadayaan Xukumadda deegaanka iyo xisbiga talada haya, wuxuuna Madaxweynahu cafis ka dalbaday shacabka deegaanka.
“Dhammaanteen waa inaan khaladkeenna qiranno, isla-markaana aan dalbanno cafis, dhaqankaasi ayaa loo baahan yahay inaan dhammaanteen caadeysanno” ayuu yidhi. Jabhadda ONLF oo uu dhawaan golaha baarlamaanka dalka Itoobiya ka saaray liiska ururrada argagixisada, ayuu weydiistay in fursadda la siiyey iyaga oo ka faa’ideysanaya ay si nabadgalyo ah siyaasaddooda u wataan. “Hoggaanka jabhaddu colaaddii iyo naceybkii hore ee ay sannado badan waddanka u hayeen intey dhinac iska dhigaan, dadaallada nabadeed ee dalka ka socda waa iney qayb ka noqdaan” ayuu yidhi Cabdi Maxamuud Cumar. “Dhammaan maxaabiistii u xidhneyd deegaanka ee jabhadda ONLF waa la sii wada daayey, wakhti xaadirkan hal Qof oo jabhadda ONLF darteed u xidhan ma jiro” ayuu sii raaciyey. Hadalka Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku soo beegmaya ayadoo Isbeddello siyaasadeed ay ka socdaan dalka Itoobiya.
Xisbiga EPRDF Oo U Jawaabay Madaxweynaha Dawlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia
Kadib waraysiga uu bixiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Maxamuud Cumar ee uu ku eedeeyay madixii hore ee sirdoonka Itoobiya Mr. Gatachew, ayaa waxa haddalkiisa jawaab ka timid xisbiga haya talada ee EPRDF. BBC-da laanteeda Afka Amxaariga ayaa waraysi ay la Yeelatay Gudoomiye ku xigeenka xisbiga TPLF ahna madaxa xafiiska Xaruunta dhexe ee EPRDF marwo Fetlawarqi G/Igzaaber, waxay jawaab ka bixisay hadalka Madxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana ay tidhi “Arrintan waxba kama ogi. Aniguna shaqsi ahaan wax uu ii sheegay ma jirto, mana ahaba inuu ii sheego. Cabashada noocan ah isaga oo sharciga iyo nidaamka raacayo xubnaha dowladda ee ay khuseyso inuu u gudbiyo ayay ahayd. Sidaa darteed arrintan waxba kama ogi. Arrimaha noocan ahna ma aha arrin guddiga fulinta loo soo bandhigo. Aniga waxba kama ogi arrintan”.
Sidoo kale waxaa ka hadlay cabashada madaxweyne cabdi maxamuud cumar Mr Saadaat madaxa arrimaha Isgaadhsiinta ee Xafiiska Xaruunta Dhexe ee EPRDF, wuxuuna yidhi “Warbixinta madaxweyne Cabdi waan dhageystay. Mudane Cabdi shirarka wax cabasha ah oo uu si rasmi ah uga jeediyey malaha arrintaa waxba kama ogin. Madaxda sare ee dowladda inuu cabashadiisa gaadhsiiyey wey dhici kartaa. Ka xafiis ahaan laakiin arrintaa waxba kama ogin.”
Mustafa Cumar oo ah aqoonyahan u dhashay deegaanka, una dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka ayaa BBC-da sidoo kale uga waramay waxa ay isaga la tahay eedeynta kasoo baxday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, wuxuuna yiri “midda koobaad wuxuu doonayaa inuu xilka sii hayo uuna ka mid noqdo isbeddelka siyaasadeed ee cusub. Mr Getachew iyo shaqsiyaadka kale sirtooda oo aan bannaanka soo dhigo ‘kalsoonida la igu qabo ayaa badanaysa ayuu isleeyahay”, midda labaadna waxay tahay “Mr Getachew inuu Cabdi uu xilka ka qaado ayuu marar badan isku dayay, marka arrintan wuxuu u sameeyey waxaa dhici karta iney aarsi ka tahay.”
Mr Gatachew Asafe ayaa waxaa xilka ka qaaday Ra’isulwasaare Abiy Axmed, waxaana lagu badalay mas’uul kale. ilaa iminkana kamuu jawaabin eedaha loo soo jeediyay.
Previous Maamulka Jubbaland Jen. Cali Bogmadow.ayaa saaka garoonka diyaaradaha Kismaayo ka soo celiyay Wafdi Saraakiil ciidan ahaa oo ka yimid magaalada Muqdisho, kaasoo uu hoggaaminayay Taliyaha cusub ee qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka
Next Tirada Xujeyda Somalida sanadkan & Lix shirkadood oo loo qaybiyey+ Shirkad waliba tirada xujaajtey saamiga u heshay